Xagaagii 2016, soo hel xeebta ugu xasilloon Boortaqiiska | Wararka Safarka
Xagaaga 2016, soo ogow xeebaha ugu xasilloon waddanka Portugal
Mariela Carril | | Xeebaha, Portugal
Xagaagu waa imanayaa waana wax aan macquul aheyn in laga fekerin waxa aan sameyn doono, halka aan aadi doono, hadii aan dooneyno buuro, bad ama magaalo sidii meel fasax ah. Spain aad ayey ugu dhowdahay Portugal, sidaas darteed Xeebaha Bortuqiisku marwalba waa duufaan weyn.
Boortaqiiska waxay leedahay xeebo badan oo qurux badan qaarna runtii waa kuwo caan ah, laakiin maahan iyaga kaliya. Haddii aad rabto inaad ka baxsato dadka, qiimaha qaaliga ah iyo dadka badan oo aad si fudud u raadineyso meel badda dhinaceeda ah si aad ugu nasato jirkaaga iyo naftaada, waa tan qaar ka mid ah xeebaha ugu xasilloon uguna quruxda badan Boortaqiiska. Tag oo soo hel iyaga xagaagan 2016.
Waa run in mid ka mid ah meelaha xeebaha ugu quruxda badan ee Boortaqiiska waa Algarve. Waxay uruurisaa tirada ugu badan ee xeebaha caanka ah laakiin marwalba meel ayaa loo heli karaa Magaalooyinka xeebta si aad ah looma booqan, meelo fogfog, oo leh qiimayaal badan jeebkeena dhibaatada dhaqaale ee weligeed ah. Tan ugu fiicanina waxay tahay inaysan haysan dad aad u tiro badan oo hareeraha ka taagan, oo buuq sameynaya, oo qalqal gelinaya xasilloonidaada xagaaga oo aad u qalantay.
Meeshani waa waqooyiga xeeb kale oo aan ku talin doono, Sagres. Waxay ku taal xeebta galbeed ee Algarve. IYOWaa xeeb ku taal badweynta Atlantik taas oo ka tirsan magaalada yar ee Carrapateira, oo ku taal dhinaca buurta, oo kaliya hal kiiloo mitir xeebta
In kasta oo ay yartahay, waxay qaabishaa booqdayaal iyo waxay bixisaa guryo-martiyeed oo yaryar iyo qolal gaar loo leeyahay in milkiilayaashoodu kirada u bixiyaan. Magaaladu runti waxay leedahay laba xeebood, labadaba leh ciida qurxoon oo wanaagsan iyo waliba xaalado wanaagsan oo loogu talagalay in lagu duulo. Xaqiiqdii mid ka mid ah wax yar ayaa ka shaqeeya dugsiga sare dad badan baa u yimaada gaar ahaan inay tababaraan ama wax bartaan. Hadana haddii aad jeceshahay taariikhda, waxaad marwalba dalxiis ugu tagi kartaa qalcaddii hore ee la dhisay si ay isaga difaacdo burcad-badeedda qarnigii toddoba iyo tobnaad.
Tani waa mid ka mid ah meelaha ugu caansan ee loo safro meelahaan xasilloon ee aan maanta dib u eegeyno. Waa degmo ka tirsan Vila do Bispo oo magaciisu ka soo jeedo Xurmaysan Waxay u muuqataa in Masiixiyiinta ka hor ilbaxnimooyin kala duwan ay halkan ku caabudi jireen ilaahyadooda. Horeba taariikhda ugu dhow Sagres wuxuu xiriir dhow la leeyahay safarada badda ee Boortaqiiska waxaana xitaa weerarey Ingriis caan ka ah Francis Drake.
Laakiin maanta waa inaan ka hadalno taariikhdeeda laakiin xeebteeda. Waxaad ogaan kartaa taariikhdeeda haddii aad go'aansato inaad booqato magaalo xeebeedka. Waxay leedahay afar xeebood aad ayey u fiican tahay in ka badan inta ay ka samaysan tahay sida quruxda badan ee magaalada u ahaan karto jaleecada hore. Waa a meel wanaagsan oo loogu talagalay qoysaska doonaya inay fasax ku qaataan lacag yar, badmaaxyaal ama boorsooyin. Xeebaha waa Praia de Belixe, oo ku taal cagaha buuraha dusheeda oo leh aragtiyo aad u wanaagsan, Praia do Martinhal, oo ah toban dhibic oo loogu talagalay dabaylaha, Praia do Tonel ayaa loogu talagalay inay ku socoto. ugu dambeyntiina Praia de Mareta ayaa ugufiican hadaadan rabin inaad noqoto dalxiis aad u firfircoon arintaaduna waa inaad si fudud ugu jiifsato qorraxda oo aad ugu raaxeysato inaad ku qubeysato waqti ka waqti.
Waa magaalo la aasaasay dhammaadkii qarnigii XNUMXaad dadkii ugu horreeyay ee deggenaa waxay ahaayeen dembiilayaal ay ahayd inay la kulmaan dhowr weerar oo burcad-badeed ah illaa dhismaha qalcad waxoogaa hubin ah ka sameeyo weerarada dambiyada. Ku naso xeebta Atlantic, xeebta galbeed ee Alentejo, kalabar Lisbon iyo Algarve, oo wuxuu leeyahay marin qurux badan oo ballaadhan oo ka tirsan Webiga Mira.
Hareeraheeda waxaa ku yaal xeebo badan qaarna, kuwa ugu dhow, ayaa ah beddelaadyo dalxiis oo wanaagsan. Iyagu caan kuma ahan dalxiisayaasha shisheeye marka waxaa jira dad badan oo deegaanka ah. Furnas, Aivados, Ribeira da Azanha, Praia da Franquia iyo Malhao ayaa ugu fiican. Xeebaha u dhow qarka Waxay ka yimaadeen biyo deggan oo diirran waana taas sababta ay u yihiin meelo caan ah oo la tago. Xeebtu waa qurux badan tahay maadaama ay iska leedahay Beerta Qaranka ee loo yaqaan 'Costa Vincentina de Aletejano', sidaa darteed marna ma jiri karaan goobo dalxiis oo waaweyn. Taasi waa wanaagsan tahay!
Alentejo waa magaalo xasilloon, xagaaga aad u yaqaanaan Boortaqiiska, oo ay ku yar yihiin dalxiisayaasha ajaanibta ah, Vila Nova de Milfontes ayaa loogu talagalay iyaga sidaa darteed cidina qiimo kuguma dilaan Xilligeeda dalxiisku waxay u qaybsan tahay laba qayboodWaxaa jira fasaxyada xagaaga ee Bortuqiiska (laga bilaabo dhammaadka Luulyo illaa dhammaadka Ogos), ciidaha gaagaaban laakiin aadka u daran ee ay ku badan yihiin dadku meel kasta oo ay joogaan, iyo xilli hoose oo ay Protugues-ku shaqeynayaan.
Fasaxyada ka baxsan Portugal Vila Nova de Milfontes waa meel nasasho leh, xasilloon Maskaxda ku hay waxa ugu horreeya ee aad horay u sii qabsatay, haa. Cimilada ugu fiican waxay bilaabataa bartamaha Maajo waxayna socotaa illaa dhammaadka Sebtember. Guga waa qabow, deyrkuna sidoo kale waa qabow, laakiin haddii aadan rabin inaad ku ekaato xeebta oo aad sahamiso gobolka, waa wakhtiyo wanaagsan oo sidaas lagu sameeyo: raacida baaskiilka, socodka, socodka buuraha. Baddu marwalba way qabowdahay, haa, ka dib oo dhan waa badweynta Atlaantik.
Maxaan kugula talineynaa inaad ku aragto Vila Nova de Milfontes? Ku Fort Sao Clemente kaas oo ilaaliya albaabka laga galo marinka burcad-badeedda Mira de, oo hadda loo beddelay hudheel, ka laydh ku yaal buurta, isla afaafka hore, waxaad kula biiri kartaa dekedda socod xeebeed wacan, the Kaniisadda Our Lady of Grace, qarnigii XNUMXaad in kasta oo la soo celiyey 1959 iyo dabcan dhammaan xeebaha. Ha iloobin inaad tijaabiso caloosha deegaanka!
In kasta oo aysan ahayn magaalo xeebeed badda laakiin ku taal xeebta webi, webiga Gilao, waa meel gaar ah maxaa yeelay doon yar oo keliya 10 daqiiqo ayaad qaadataa waxaadna ku dhex jirtaa qurux Ilha de Tavira, waa meel leh 14 kilomitir oo xeeb ah.
Tavira waxay leedahay taariikh qadiimi ah, oo ka bilaabmaysa xilligii maarta iyo Phoenicians, Roman iyo Moors ayaa soo maray. Waa magaalo aad u soo jiidasho badan, leh hudheelo, baarar, maqaayado iyo maqaaxiyo, buundo caan ah oo caan ah iyo dhismayaal taariikhi ah oo dhowr ah. Waa maxay waxay 20 kiiloomitir uun u jirtaa xadka Spain waa faa'iido. Xeebaha, waa inaad u gudubto jasiiradda laakiin doomaha ayaa aad u badan.
Horaad u ogayd markaa, haddii aad ka fikirayso Portugal xilligan fasaxa xagaaga waxaad dooran kartaa meelo aan la aqoon, caan ka ahayn, iyo meelo aan qaali ahayn.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » Getaways Yurub » Portugal » Xagaaga 2016, soo ogow xeebaha ugu xasilloon waddanka Portugal
Xeebaha ugu wanaagsan Bartamaha Ameerika
Saddex iyo toban codsiyo waxtar leh oo la socda carruurta